संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधन गर्दै, भारत भ्रमणवारे जानकारी दिने ! | Seto Khabar
धनुषामा एमालेले पालिका प्रमुखमा खाता खोल्यो
भरतपुरमा झन मतान्तर बढाउदै रेनु, विजय पछ्याउने कोशिसमा
गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादीले सेटिङ गरेर लाभ लिए : डा. भट्टराई
कांग्रेस भक्तपुर सभापति दुर्लभ थापाको वडामा एमाले विजयी
प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र माडीमा एमालेकी ताराकुमारी विजयी
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी
९ महिनापछि संसद अवरोध हट्यो, एमालेले फरक ढंगले विरोध गर्ने
काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको मेयरमा राप्रपाका नापित विजयी
रेनुको अग्रता झन बढ्यो
हेटौँडामा फराकिलो मत अन्तर बनाउदै राप्रपाका दिपकबहादुर सिंह
काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा काँग्रेस
एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टको गृहपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधन गर्दै, भारत भ्रमणवारे जानकारी दिने !
२०७४ चैत्र २०, मंगलबार (४ साल अघि)
काठमाडौँ, चैत २० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा विशेष सम्बोधन गर्दैछन् । चैत २३ गतेबाट हुने भारत भ्रमणबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री ओलील संसदमा विशेष सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । भारत भ्रमण प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने मुद्दाको सूचि तयार गरेको थियो ।
तिनै मुद्दालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने बताइएको छ । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले खासगरी तीनवटा विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ । जसमा आधुनिक कृषि प्रणाली, निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना पुरा गर्ने र सडकमार्ग र रेलमाग लगायतका विषम पहिलो प्राथमिकतामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसबाहेका आपसी र दुईपक्षीय हितमासमेत कुराकानी हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद् अधिवेशन जारी रहेका बेला राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर हुने भ्रमणको जानकारी सदनलाई दिने प्रचलन अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोबोधनका लागि संसद सचिवालयले कार्यसूचीमामा राखेको प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए ।
५ हजार बढि मत लिएर अगाडि बढ्दै बालेन